ငြိကုန်ပြီ- လယ်/ဆည်ဝန်ကြီး လွှတ်တော်ကိုတောင်းပန်ရန် အမတ်များတောင်းဆို | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » News » ငြိကုန်ပြီ- လယ်/ဆည်ဝန်ကြီး လွှတ်တော်ကိုတောင်းပန်ရန် အမတ်များတောင်းဆို
ငြိကုန်ပြီ- လယ်/ဆည်ဝန်ကြီး လွှတ်တော်ကိုတောင်းပန်ရန် အမတ်များတောင်းဆို
Posted by ရွာစားကျော် မင်းနန္ဓာ on Mar 24, 2012 in News, Politics, Issues | 12 comments
လည်ဆည်ဝန်ကြီးနဲ့ လွှတ်တော်အမတ်တွေ ငြိကြပြီ လွှတ်တော်
Hotnews ဂျာနယ် မျက်နှာဖုံးက လည်ဆည်ဝန်ကြီး အင်တာဗျူး
လယ်တစ်ဧကထဲကို ရေရောက်ဖို့ သိန်းဘယ်လောက်ကုန်တယ်ဆိုတာ၊ အဲဒီဈေးတွက်တွက်နည်းနဲ့ တွက်တာ သက်သက် အပြစ်တင်ဖို့ ဝေဖန်တာပဲ။ ဒါ-ဦးနှောက်မရှိတာပေါ့၊ ရှိရက်သားနဲ့ သက်သက် Negative ဆန်တာပေါ့၊ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဆိုပြီး စာမှမတတ်၊ ဆယ်တန်းမှမအောင်ဘဲ။ လွှတ်တော်ထဲကို လာထိုင်နေတော့ သူများက ထဆို ထမယ်။ ထိုင်ဆိုရင်ထိုင်မယ်။ သူများက ခလုတ်နှိပ်ဆို နှိပ်တယ်။ သူကမှ မသိတာ၊ ဘာတွေပြောနေလဲ၊ သူကမှ နားမလည်တာ။ ရမ်းပြီး လုပ်နေတာ။ လှော်တဲ့ ကောင် ကလည်း လှော်ရမယ်။ ထိုင်တဲ့ကောင်ကလည်း ငြိမ်ငြိမ်လေးထိုင်၊ အသက်ကြီးပြီဆိုရင် ငြိမ်နေရမယ်။ ငြိမ်ငြိမ်လေးမထိုင်ဘဲ အသားကုန် ဟိုလှုပ် ဒီလှုပ်၊ လှုပ်နေရင်တော့ ဒါ ဘုန်းကြီးရူးနဲ့ လှေလူးနဲ့…
credit: VOAမြန်မာ- မူရင်းလင့်ခ်
စ လုံ ရေ စ ပါပြီ။
မတည့်ကျလျင် ပုပ်တာတွေ ပေါ်မည်။ ကောင်း၏ ။
တပ်မတော်က ၀င်ထိန်းလိုက်ရတယ်ဆိုတဲ့ ကြမ္မာ တပတ်ပြန်လှည့်မှာလည်းစိုးရတယ်
ကြည့်ကောင်းမဲ့ အခြေအနေလေးပါ၊ ဒူးလေးနှန့်ပြီး ဇိမ်လေးနဲ့ စောင့်နေရုံပါပဲ၊
အတိုက်အခိုက်ကောင်းလေ ပြည်သူတွေ အတွက် ကောင်းလေပါ ။
အမှန်တကယ် ပြုပြင်ပြောင်းလဲ မှုတွေ ကြားချင် မြင်ချင်လှပါပီဗျာ။
“ဖမစစ်တော့ လက်သရမ်း၊ မိမစစ်တော့ နှုတ်ကြော့ကြမ်း”တဲ့ ရှေးလူကြီးသူမတွေ ဆုံးမခဲ့တာပါ။
အင်မတန် သဘောကျစရာကောင်းပါတယ်၊ တိုင်းပြည်ကောင်းစားရေးအတွက် အားလုံးလက်ခံကျင့်သုံးနိုင်ကြပါစေ။
ယူအက်စ်မှာ.. အစိုးရနဲ့.. လွှတ်တော်.. မတည့်ပါဘူး..
အခုလောလောဆယ်ဆို.. အစိုးရက.. ဒီမိုကရက်..။ လွှတ်တော်က.. ရီပါ့ဗလစ်ကန်င်အများစုဆိုတော့.. ပိုဆိုးတယ်..။ တချိန်လုံး နောက်ဂျိန်ချနေတာပေါ့..။
တခါကများဆို.. သမ္မတလွှတ်တော်ထဲ တိုင်းပြည်ကိုမိန့်ခွန်းပြောနေတာ.. အမတ်တယောက်က.. You Lie! ဆိုပြီးထအော်တယ်.
(ပြီးတော့ အမေရိကန်ထုံးစံအတိုင်း ပြန်တောင်းပန်ပါတယ်)
Rep. Joe Wilson Yells Out “You Lie!” During Obama Health Care ...
Sep 9, 2009 – Joe Wilson has apologized for yelling out “You lie!” to Obama during his health care speech in front of Congress:This … Joe Wilson Obama Lie Video , Obama Called Liar Video , Obama Health Care Speech Lie , Politics News …
လွှတ်တော်က.. လူထုကို အဓိကကိုယ်စားပြုနေတာ မဟုတ်လား..။
( ယူအက်စ်မှာ.. လွှတ်တော်ညီရင်.. အစိုးရကို ဘက်ဂျက်မချပေးတာမို့.. အစိုးရအလုပ်ပိတ်(Government shutdown)ရတတ်ပါတယ်..
အစိုးရမှာ.. ၀န်ထမ်းတွေပေးဖို့ ..လစာငွေမရှိဘူးဖြစ်တတ်ပါတယ်..။.. ဒါက.. Checks and Balances အနှစ်သာရဖြစ်ပါကြောင်း..)
လယ်/ဆည်ဝန်ကြီး ဦးမြင့်လှိုင်ဆိုတာ ဆင်းရွှေလီမြင်.လှုိင်လို.ခေါ်တယ်။တရုတ်ဆင်းရွှေလီစပါးစိုက်ပျိုးတာဘာမှ
။လားရိုးမှာROAYL ကြက်ဆူဆီဆိုပီးလုပ်လို.နေပြည်တော် ဗိုလ်ချုပ်မြင်.လှိုင်ပါပဲ။
ဆင်းပြောရတယ်။အခုလဲ ဆင်းရွှေလီကြံ ပင်ဆိုပီနေပြည်တော်မှာစိုက်နေပါတယ်။
အဲဒီလူဂျီးလား… ဗိုလ်ခင်ညွှန့်တို့ ကိစ္စပြီးသွားတဲ့နောက်ပိုင်း သူ့နာမည် ထင်ထင်ရှားရှား မတွေ့မိတော့လို့ ဘယ်ရောက်သွားသလဲလို့…။ ဗိုလ်မြင့်လှိုင်ရေ သိပ်မကဲနဲ့.. ထောက်လှမ်းရေးဟောင်းတွေက ခင်ဗျားကို စနှိုက်ပါနဲ့ ချောင်းပစ်လိမ့်မယ်။။
မနှစ်ကဘယ်မှာလဲမသိဘူး လွှတ်တော်ထဲ အမတ်တွေ ထတီးကြတာ ပွဲကြီးပွဲကောင်းပဲ
မြန်မာ့အလင်းကော ကြေးမှုံမှာရော ခေါင်းကြီးပိုင်းကကိုပါလာတာ
ဒီနေရာမှာ နိုင်ငံရေးသမားစစ်စစ်ဆို ကိုယ့်ပေါင်ကိုယ်လှန်ထောင်းမဲ့(ကိုယ့်ပါတီပြန်ထိမဲ့) အပြောတော့ ရှောင်မှာပဲထင်တယ်..
အခုတော့ အရင်အကျင့်ကမဖျောက်နိုင်.ထင်ရာစွတ်ပြော. ကလောင်တံကြီးက ငယ်ထိပ်တက်ဆောင့်ရော..
လွှတ်တော်ပါဝါပြလိုက်ပါ အမတ်မင်း ဒို့….